७५ बर्षिया यी बृद्ध महिलाले युवती र महिलालाई धन्दा गराउने गरेको खुल्यो यस्तो रहस्य! (भिडियो हेर्नुस्) – Namaste Host
April 11, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on ७५ बर्षिया यी बृद्ध महिलाले युवती र महिलालाई धन्दा गराउने गरेको खुल्यो यस्तो रहस्य! (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाण्डाैं । कतिपय अवस्थामा कसैको पनि उमेर हेरेर गरिएको आँकलन गल्ती प्रमाणित हुने गरेको छ । एक वृद्ध महिलाले आफ्ना छोरी बुहारी जस्तो महिलालाई नराम्रो काम गर्छिन होला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिदैन । एक ७५ वर्षीया वृ’द्ध महिलाले अन्य युवती र महिलालाई धन्दा गराउने गरेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सानो होटल संचालन गर्दै आएकी ती बृद्ध’ महि’लाले होटलको आवरणमा अ’न्य काम पनि गर्न थालेको संकेत स्थानिय छिमे’कीले शंका गरेका थिए ।
छिमेकीले होटलमा भइरहेको गति’विधि प्रति चासो’ राखिरहेका थिए । एक जना महिला भन्छिन्, यति सानो होटल छ वि’हान दुध ल्याउने पुरुषहरुको लामो साइकलको लाइन लाग्ने गरेको छ । यस्तो वृद्ध महिलाले यस्तो काम गराउँछिन् भन्ने कल्पना कसरी गर्ने ? प्रहरी र स्थानियले उनलाई पहिलो पटक फे’ला परेको भन्दै मा’फी दिएका छन् । उनले लकडाउन पछि ब्यवसाय चौ’पट भएपछि यस्तो ध’न्दा चलाउन लागेको बताएकी छन । तर स्थानियले उनको पहिला पनि होटल भएको बताउँछन् ।
तर केही पर होटल गर्दै आएकी ति महिलाले लक’डाउन पछि ठाउँ सारेकी थिइन् । उनले थोरै क’माई गरेर पसल सं’चालन गरेको बताएकी छन् । उनले केही महिला आफुहरुले त्यस्तै काम गर्ने गरेको बताएकी छन् । उनले दिनमा एक दुई जना पु’रुष कामका लागि आउने गरेको र ति पु’रुषलाई महिलाले से’वा दिने गरेको बताइन् ।
उनको चिया नास्ता पसलमा प्र’हरी आए त्यस्ता ब्यक्तिलाई भा’ ग्ने ठाउँ पनि बनाएकी छन् । स्थानिय र संचारकर्मी जाँदा त्यहा धन्दा गर्ने महिला पनि फेला परेका थिए । उनीहरुले आफुहरु सम’ परेर यस्तो काम गर्न बाध्य भएको बताए । श्रीमानले छोडेर हिडेपछि साना छोराछोरी पाल्न यस्तो पेशा गर्न बाध्य भएको महिलाले बताए ।